"4 3 2 1", nke ọhụrụ site n'aka onye edemede Paul Auster maka Seix Barral | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
«4 3 2 1», ọhụrụ si Paul Auster
Anyị na-ama na-atụ anya ihe ọhụrụ si Paul auster, na agbanyeghị na o were obere oge ịpụta (maka anyị ndị na-eso onye edemede ahụ ntakịrị oge ma nwee ọ enjoyụ ihe niile ọ na-agụ), anyị nwere ya ugbu a. Na obere aha ma ọ dịkarịa ala: "4 3 2 1", e bipụtara n'okpuru Isi akụkọ Seix Barral. Ọzọ, anyị ga-agwa gị ntakịrị ihe gbasara akwụkwọ a ma anyị ga-ahapụrụ gị mkparịta ụka dị mkpirikpi nke onye edemede ahụ n'onwe ya nyere onye nkwusa ahụ.
Naanị eziokwu na-adịghị agbanwe agbanwe na ndụ Ferguson bụ na a mụrụ ya na Machị 3, 1947, na Newark, New Jersey. Site n'oge ahụ gaa n'ihu, ụzọ dị iche iche meghere n'ihu ya ga-eduga ya ibi ndụ anọ dị iche iche, tolitere ma chọpụta ịhụnanya, ọbụbụenyi, ezinụlọ, nka, ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ọbụna ọnwụ n'ụzọ dị iche iche, yana ụfọdụ n'ime ihe omume ndị ama akara nkera nke abụọ nke narị afọ nke iri abụọ nke America dị ka ihe ndabere.
Gịnị ka ị gaara eme ma ọ bụrụ na i meghị ihe dị iche n'oge dị oké mkpa ná ndụ gị? 4 3 2 1, Akwụkwọ mbụ Paul Auster dere n’ime afọ asaa, bụ ihe osise na-akpali akpali nke ọgbọ dum, a afọ na-abịa eluigwe na ala na otu saga saga nke na-enyocha n'ụzọ na-adọrọ adọrọ njedebe nke ohere na nsonaazụ nke mkpebi anyị. N'ihi na ihe omume ọ bụla, agbanyeghị na ọ dị adịghị mkpa, na-emepe ohere ụfọdụ ma mechie ndị ọzọ.
Ajụjụ ọnụ maka Seix Barral
Ajụjụ ọnụ: Kedu ka ihe dị mma si bịa?
Paul Nwokocha: Amaghị m. Otu ụbọchị, anọ m ebe a n'ụlọ m na echiche nke ide akụkọ ndụ mmadụ dị iche, ndụ ha yiri, metụrụ m n'ahụ. O bilitere. Amaghị m ihe kpatara ya ma ọ bụ etu esi eme ya. Enwebeghị ike ịchọta mmalite nke otu echiche maka akwụkwọ. Otu oge enweghị ihe ọ bụla na oge ọzọ ị nwere ihe ebe ahụ. Enwebeghị m ike ịchọta oge ahụ mgbe ihe ọ bụla ghọrọ ihe ọ bụla. Ọ mere naanị. Ihe m nwere ike ịgwa gị bụ na enwere m nnukwu obi ụtọ banyere echiche ahụ, nke bụ ihe jidere m nke ukwuu. Ekwesịrị m ịsị, edere m ya na ahụ ọkụ, ọ dị ka ịgba egwu na ịgbagharị, na enwere ụdị ịdị ngwa maka ihe m na-eme nke ahụ bụ ihe pụrụ iche.
Ajụjụ ọnụ: Remember chetara ụbọchị ndụ gị gbanwere?
Paul Nwokocha: Akwụkwọ a abụghị akwụkwọ ọgụgụ isi, ọlị. Mana enwere eziokwu di n’ime ya nke dabara na ihe mere m, n’onwe m, mgbe m dị afọ iri na anọ. O mere mgbe m nọ n'ogige oge ezumike na otu ụmụ okorobịa, ihe dị ka iri abụọ, banyere n'ọhịa maka njem wee banye n'oké mmiri ozuzo. Ebe anyị chọrọ ịhapụ ụzarị ọkụ ahụ, anyị banyere n'ọhịa mepere emepe. Iji nweta ya, anyị aghaghị iri ari n'okpuru ogige e ji eriri rụọ. Mgbe ahụ, anyị gara otu faịlụ, otu n'otu, n'okpuru ngere. O nwere otu nwa nwoke nọ n’ihu m, m na-ekwu na ọ dị nso na ụkwụ ya dị sentimita asatọ na ihu m. Mgbe ọ na-agabigakwa n’okpuru mgbidi ahụ, àmụmà gbagburu ya ozugbo. Echere m na nke ahụ bụ ihe kachasị mkpa m hụtụrụla. Lee nwa nwoke nwuru ozugbo. Ọ bụ ihe na-enye m nsogbu oge niile. Akwụkwọ a, echere m, sitere na ahụmịhe ahụ. Ya mere, ọ bụ ihe m bu kemgbe m dị afọ iri na anọ.
Ajụjụ ọnụ: Ohere.
Paul Nwokocha: E nweela oge ndị ọzọ dị oke mkpa na ndụ m. Echere m na ihe mberede nke ịchọta nwunye m, Siri Hustvedt, bụ ma eleghị anya ihe kachasị mkpa. Ma ọ bụ naanị na mberede. Mgbe ụfọdụ, m na-eche ihe gaara eme m ma a sị na anyị ezuteghị ụzọ ahụ. Olee otú ndụ m dum gaara adịworị? Site na nke a anaghị m ekwu na ohere na-achịkwa ihe niile. Anyị nwere onwe anyị ime nhọrọ, anyị nwere nnwere onwe ịhọrọ na ime mkpebi. Anyịnwa nwekwara ọrụ anyị na ya ga-egbo mkpa anyị. Mana ihe anyi kwesiri ime mgbe nile, ime ihe n'eziokwu na ihe ndu bu, ighota na ịnakwere na ihe a na-atughi anya bu uzo nke ndu.
Ajụjụ ọnụ: A akwụkwọ akụkọ banyere ndụ.
Paul Nwokocha: Ya mere amalitere m iche ihe mere m ji na-atụgharị uche na ajụjụ a, gịnị bụ akwụkwọ akụkọ na akwụkwọ na-abụghị. O doro anya, ihe niile sitere n'echiche gị sitere n'ike mmụọ nsọ gị. Ma, dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị nwere agwa na akwụkwọ edemede gị na-ese sịga ma ị smụọ 10.000 siga na ndụ gị, ọ bụ akụkọ ahụ ka ọ bụ na ọ bụghị? Ka o sina dị, isi ihe n'okwu ahụ bụ akụkọ ifo. Ọbụlagodi mgbe i tinyere ihe a na-akpọ "ezigbo eziokwu" na akwụkwọ akụkọ, ha na-aghọ akụkọ ifo, ha na-abụ akụkụ nke akụkọ ifo. Echere m na ọ ga-abụ ntụgharị asụsụ na-ezighi ezi ịhụ akwụkwọ dị ka ụdị onyinyo autobiography. Ọ bụghị. Ọ dịghị ma ọlị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » «4 3 2 1», ọhụrụ si Paul Auster
_Ohia nke kristal_. John McClaine na-atọ ọchị (na amaokwu).